विचार / विश्लेषण शहिद हरि नेपाल– केही विम्बहरु
(सन्दर्भः शहिद हरि नेपालको ३७ औं स्मृति दिवस)
Thursday, 29 Dec, 2016 2:04 PM
मैले झापाली क्रान्तिकारीहरुको संगत गरेदेखि नै पूर्वी पहाडहरु खासगरी ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा आदि जिल्लाहरुमा किसान जनताका अन्याय–अत्याचार शोषण–उत्पीडन विरोधी संघर्षका कथाहरु सुन्दै आएको थिएँ । स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको जुझारु प्रगतिशील गतिविधिहरु, ग्रामीण क्षेत्रका किसान जनताका स्थानीय जाली, शोषक, फटाहाविरोधी संघर्षहरु, जनता बीचको जुझारु एकताका कथाहरुले मलाई अत्यन्त रोमाञ्चित तुल्याउने गर्थे । विद्यालयहरुमा पढाउने शिक्षकहरु आमरुपमा जनतामा प्रगतिशील जागरणका लागि उत्प्रेरक बन्ने गरेका थिए । ताप्लेजुङ जिल्लाको सिनाम यस्ता गतिविधिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र थियो । क. हरि नेपाल यसै क्षेत्रका क्रान्तिकारी गतिविधिहरुका उपज हुनुहुन्थ्यो ।
विद्यार्थी गतिविधिदेखि किसान जनताका जंगी संघर्षहरु र शिक्षण पेशामा लागिसक्दा पनि हरि नेपाल यस्ता गतिविधिहरुमा सामेल भइरहनुभयो । यसैमा रमाउँदै अघि बढिरहनुभयो र अझ पछि गएर त यसको केन्द्र भएर भूमिका खेलिरहनुभयो । विकसित हुँदै गरेको हरि नेपालको आसलाग्दो क्रान्तिकारी व्यक्तित्वको विम्ब मेरो दिमागमा जन्मदै, हुर्कंदै र झन–झन् चहकिलो बन्दै गइरहेको थियो ।
पुलिसहरुले उहाँहरुलाई आत्मसमर्पण गर्न चेतावनीपूर्ण आदेश दिए । उहाँहरुले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । दोहोरो भिडन्तमा सँगै रहनुभएका कमरेड चन्द्र पुरीले लड्दालड्दै वीरगति प्राप्त गरी सकेपछि पनि हरि नेपाल आत्मसमर्पण नगरी हातमा बोकेको हतियारलाई उठाउँदै अन्तिमसम्म दृढतापूर्वक लडिरहनुभयो । २०३५ पुष ११ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) को स्थापनाका लागि तत्कालिन ‘को–अर्डिनेशन केन्द्र’ले राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलन स्थलमा विभिन्न जिल्लाहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्दै क्रान्तिकारीहरु आइरहनुभएको थियो । तर, ताप्लेजुङबाट हरि नेपाल आइपुग्नु भएन । हरि नेपाल मात्र होइन, वासु शाक्य पनि आउन सक्नुभएन । पछि थाहा लाग्यो – प्रतिक्रियावादीहरुको दमनका कारण उहाँहरुले क्षेत्र छाडेर बाहिर निस्कन सम्भव भएनछ ।
सम्मेलनस्थलमा उहाँहरु आइ नपुग्नुले अपशकुनको आशंकामा पिरोलिएका हामीहरु यथार्थ कुुराहरुको जानकारी पछि ढुक्क बनेका थियौं । क्रान्तिकारी जनताका बीचमा उहाँहरु सुरक्षित रहेर जनतालाई सचेत र संगठति बनाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर हामीहरु सबै अत्यन्तै खुशी भएका थियौं । त्यसबेला ‘पूर्व–उत्तर क्षेत्र’ भनेर संगठित गरिएको क्षेत्रले मेची–कोशी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरुलाई बुझाउँथ्यो । त्यस क्षेत्रमा क. रत्नकुमार वान्तवा आशालाग्दो किसिमले नेतृत्वमा स्थापित भइरहनुभएको थियो । समग्र गतिविधिमा अगुवाई गरिरहेका कारण रत्नकुमार पछिको नेता हरि नेपाल नै हुनुहुन्थ्यो । वास्वतमा रत्नले आफूपछि सिङ्गो क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिको रुपमा हरि नेपाललाई स्थापित गरिरहनुभएको थियो । त्यसैले कमरेड हरि नेपालको सुरक्षा पार्टीको विकासमा गम्भीर महत्व राख्ने विषय हो भनेर त्यसबेला हामीहरु सबैले बुझेका थियौं ।
२०३५ साल चैत्र २७ गते ‘पूर्वको रातो तारा’ अस्ताएको थियो, अर्थात् त्यो दिन प्रतिक्रियावादी सशस्त्र शक्तिले मुठभेडको नाममा रत्नकुमार वान्तवाको हत्या गरेका थिए । प्रतिक्रियावादीहरुले कमरेड रत्नको हत्यासँगै सिङ्गो त्यो क्षेत्रमा घोर दमनचक्र चलाएका थिए । खासगरी इलाम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ र धनकुटा त्यसको चपेटामा परेका थिए । त्यसबेला पार्टी नेतृत्वको दुईवटा कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनै पर्ने थियो । पहिलो, त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कमरेडहरुको सुरक्षा । दोस्रो, कमरेड रत्न कुमार वान्तवाको हत्यापछि त्यहाँको पार्टीपंक्तिलाई नयाँ स्तरमा व्यवस्थित र संगठीत गर्ने कुरा । यी दुवै कामलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । प्रतिक्रियावादी सत्ताले सिर्जना गरेको श्वेत आतंकका बीचमा यी दुवै सँगसँगै नगरी नहुने काम थिए । यसको लागि क. हरि नेपाललाई नै केन्द्र गरी अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प थिएन । यसैले, त्यसबेला पार्टी नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले उहाँसितै बसेर परिस्थितिको समग्र विश्लेषण गर्ने, वस्तुवादी ढंगले निचोड र निस्कर्षमा पुग्ने तथा पार्टी कामलाई अगाडि बढाउन ठोस योजनाहरु बनाउने सोच बनायो । २०३५ पुस ११ गते नेकपा (माले)को स्थापना पछि केन्द्रीय कमिटीको महत्वपूर्ण बैठक रुपन्देही जिल्लाको सीतापुरमा आयोजना गरिएको थियो । त्यो बैठकले नवगठीत पार्टीले गर्नुपर्ने कामका साथै पार्टी विस्तारको योजना समेत बनाएको थियो । पुष्पलालले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट असन्तुष्ट भई केही क्रान्तिकारीहरु ‘मुक्तिमोर्चा’ समूहमा छुट्टै संगठीत हुनुभएको थियो र पछि उहाँहरु ‘को–अर्डिनेशन केन्द्र’मा समावेश भएपछि सीतापुर, अझै भन्ने हो भने सिङ्गो लुम्बिनी क्षेत्र ‘झापाली क्रान्तिकारी’ धार बोकी गठन गरिएको नेकपा (माले)को एकलौटी प्रभावमा पुगेको थियो । त्यसबेला रुपन्देहीको सीतापुर क्षेत्र एक किसिमले क्रान्तिकारीहरुको आधार इलाकाको रुपमा थियो । हो, यही आधार इलाकाको रुपमा रहेको सीतापुरमा नवगठित मालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिएको थियो र त्यही बैठकमा कमरेड हरि नेपाललाई बोलाइएको थियो । भैरहवा हुँदै स्थानीय साथीहरुको सहयोगमा सीतापुर पुग्नुभएका हरि नेपालसँग मैले पहिलो पटक नजिकैबाट परिचित हुने मौका पाएको थिएँ । मैले त्यसबेला हरिलाई गम्भीर र भरोसालाग्दो कमरेडको रुपमा पाएँ । प्रतिक्रियावादीहरुद्वारा चलाइएको दमन र हत्याको विरुद्धमा मुकाबिला गर्ने दह्रो मानसिकता भएको क्रान्तिकारी नवजवानको रुपमा पाएँ ।
अहिले पनि मेरो मानसपटलमा गोरो अनुहार, ठीकठीकै उचाई भएको, मन्द मुस्कानसहित आफ्ना भनाइहरु प्रस्तुत गर्ने, अरुका कुरा पनि अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन्ने हरि नेपालको तस्वीर नाचिरहेको छ ।
त्यसबेला तत्कालीन नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनाली लगायतका सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले हरि नेपालसित दमनको चपेटामा परेका पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुको स्थितिबारे रिपोर्टिङ सुनेका थियौं । कमरेड रत्नको हत्यापछिको स्थिति, त्यहाँका अनुकुलता तथा प्रतिकुलताहरु, शक्ति सन्तुलनको अवस्था, आफ्नो संगठित शक्ति, चुनौती तथा भविष्यमा पार्टी कामलाई अगाडि बढाउन बनाउनुपर्ने योजना आदि बारे क. हरि नेपालले सविस्तार आफ्नो तर्फबाट विचार राख्नुभएको थियो । झन्डै दुई दिन लगाएर हामीले त्यसबेला उहाँका कुराहरु सुनेका थियौं । त्यसबेला अरु कमरेडहरुलाई के लाग्यो कुन्नि तर मैले भने एउटा गम्भीर सन्तुलित विचार राख्ने जनतामाथि अगाध विश्वास राख्ने बौद्धिकताले भरिएको मृदुभाषी क्रान्तिकारी व्यक्तित्वको रुपमा उहाँसित परिचित हुने मौका पाएको थिएँ । उहाँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले बैठक अवधिभरि उहाँलाई छुट्टै कोठामा राखेर हामीले झण्डै दुई हप्ता लगाएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेका थियौं । बैठकले हरिलाई केन्द्र गरी, उहाँलाई पछि नेतृत्वमा विकास गर्ने योजनाका साथ तत्काललाई क. प्रदिप नेपाललाई ‘पूर्वी–उत्तर क्षेत्र’को प्रमुख बनाएर पठाउने निर्णय गरेका थियौं । त्यही बैठकपछि क. प्रदिप नेपालले लुम्बिनी अञ्चल छोड्नुभएको थियो । अहिले पनि मेरो मानसपटलमा गोरो अनुहार, ठीकठीकै उचाई भएको, मन्द मुस्कानसहित आफ्ना भनाइहरु प्रस्तुत गर्ने, अरुका कुरा पनि अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन्ने हरि नेपालको तस्वीर नाचिरहेको छ । रत्नकुमार वान्तवाको हत्यापछि ‘पूर्व–उत्तर’ क्षेत्रको प्रमुख जिम्मेवार रहनुभएका क. हरि नेपाल पार्टी केन्द्रबाट क. प्रदिप नेपाललाई त्यस क्षेत्रको सचिवको रुपमा पाएपछि खुसी हुनुभएको थियो । उहाँले त्यसबेला भरोसालाग्दो अभिभावक पाएको अनुभव गर्नुभएको कुरा एक पटक ‘हेडक्वाटर’मा लेख्नुभएको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । रत्नको हत्यापछि प्रतिक्रियावादीहरुले उहाँलाई तारो बनाएको थियो । चारैतिर स्वेत आतंक छाएको थियो । क्रान्तिकारीहरुको टाउकोको मूल्य, इनाम र पुरस्कारको रुपमा प्रतिक्रियावादीहरुले घोषणा गरेका थिए । त्यस्तो वातावरणमा पनि क. हरि नेपाल क्रान्तिकारी काममा दृढतापूर्वक जुटिरहनु भएको थियो । उहाँमा दृढता, आत्मविश्वास र लडाकु भावनामा थप वृद्धि भएको पाइन्थ्यो । क. रत्नकुमारको हत्यापछि पार्टी नेतृत्वलाई समग्र परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराउँदै आउने दिनमा कसरी पार्टी कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर आफ्ना योजना प्रस्तुत गरिरहँदा हरि नेपाल क्रान्ति र परिवर्तनप्रति विश्वास लिएर पार्टी रिपोर्टिङहरु प्रस्तुत गरिरहनु भएको देखिन्थ्यो ।
सिङ्गो ‘पूर्वी–उत्तर’को नेताको रुपमा आफ्नो सक्रिय भूमिकालाई अगाडि बढाइरहनु हुने क. हरि नेपाल तोकिएको क्षेत्रअन्तर्गत प्रायः सबै जिल्लाहरुमा जाने त्यहाँका साथीहरुसित भेट गर्ने, समग्र परिस्थितिको बारे जानकारी लिने र आफ्नो सांगठनिक गतिविधिहरुलाई व्यवस्थित किसिमले अगाडि बढाउने योजनामा लाग्नु भएको थियो । पार्टीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा २०३६ पुष १२ गते संखुवासभा जिल्लाको सिवुवा स्यावुन गाउँको नागी डाँडामा पुग्नुभएको थियो ।
त्यहाँ भिमबहादुर राईको घरमा उहाँले चन्द्रबहादुर पुरीसितै आश्रय लिनुभएको थियो । आश्रयस्थल प्रतिक्रियावादीहरुको कब्जामा भित्रभित्रै पुगिसकेको कुरो हरि नेपाल र चन्द्र पुरीलाई पत्तो भएन । त्यसैले भिमे राईकै विश्वासघातका कारण उहाँहरु प्रतिक्रियावादी पुलिसहरुको घेरामा पर्नुभयो । पुलिसहरुले उहाँहरुलाई आत्मसमर्पण गर्न चेतावनीपूर्ण आदेश दिए । उहाँहरुले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । दोहोरो भिडन्तमा सँगै रहनुभएका कमरेड चन्द्र पुरीले लड्दालड्दै वीरगति प्राप्त गरी सकेपछि पनि हरि नेपाल आत्मसमर्पण नगरी हातमा बोकेको हतियारलाई उठाउँदै अन्तिमसम्म दृढतापूर्वक लडिरहनुभयो । २०३६ साल पुस १३ गते सुरु भएको प्रतिक्रियावादीहरुसँगको प्रतिरोधपूर्ण संघर्ष २०३६ पुस १४ गतेको प्रथम प्रहर सुरु हुँदाहुँदै क. हरि नेपालले देश र जनताको लागि वीरगति प्राप्त गर्नुभयो । २००५ साल कार्तिक २ गते ताप्लेजुङ जिल्लाको सिनाममा जन्मनुभएका क. हरिप्रसाद नेपालले आफ्नो ३१ वर्षको उमेरमा आफ्नो अमूल्य जीवन नेपाली क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बलिदान गर्नुभयो । आफ्नो सहयोद्धा चन्द्र पुरीसँगै हरि नेपालले वीरगति प्राप्त गर्नुभएको दुःखद खबरले हामी सबै स्तब्ध भयौं, गम्भीर भयौं । शोकलाई शक्तिमा बदल्दै प्रतिक्रियावादीहरुसित बदला लिने अठोटका साथ कस्सिएका मुठीहरु उठाउँदै श्रद्धान्जली अर्पण गरेका थियौं ।
ओली डक्ट्रिन, प्रचण्ड र पाँच बुँदे रोडम्याप एरिका नाम गरेकी फिजियो थेरापिष्टलाई त्रिभुवनको सूचना चोर्न अंग्रेजले खटाएका थिए
स्ववियु निर्वाचनसँग जोडिएका अपेक्षाहरु
ट्रंपको अमेरिकालाई पछि पार्दै सी'को चीन